Fedora dia mampahafantatra an'i Kinoite mpifaninana Silverblue ary mikasa hifindra monina maimaimpoana amin'ny karazana HarfBuzz | Avy amin'ny Linux
Fedora dia mampahafantatra an'i Kinoite mpiara-miasa Silverblue ary mikasa ihany koa ny hifindra monina FreeType mankany HarfBuzz
Navoaka ireo mpamorona Fedora vao tsy ela akory izay dia nanolotra fanontana vaovao an'ny Fedora, antsoina «Kinoite» izay miorina amin'ny teknolojia Fedora Silverblue, fa mampiasa KDE fa tsy GNOME toy ny birao.
Ny sary monolithic Fedora Kinoite dia tsy mizara ho fonosana misaraka, havaozina atomika izy io ary namboarina avy amin'ny Fedora RPMs ofisialy mampiasa ny toolkit rpm-ostree.
1 Momba an'i Fedora Kinoite
1.1 Fedora 34 dia mikasa ny hifindra monina FreeType mankany HarfBuzz hanatsarana ny fambara
Momba an'i Fedora Kinoite
Ity fanontana vao nivoaka ny Fedora Kinoite ity miavaka amin'ny fampisehoana tontolo iainana ifotony (/ sy / usr) nitaingina ho famakiana fotsiny.
Ny data azo alaina ho fanovana dia hita ao amin'ny lahatahiry / var (ao anatin'izany / sns dia noforonina ho rohy an'ohatra amin'ny / var / sns, / trano ho toy ny rohy mankany / var trano, ary / opt ho rohy mankany / var / opt).
Mametraka sy manavao fampiharana fanampiny, ny rafitra fonosana flatpak misy azy irery no ampiasaina, izay fisintonana ireo rindranasa amin'ireo rafitra lehibe sy mihazakazaka ao anaty kaontenera misaraka, miampy fampiharana hafa azo apetraka avy ao amin'ny Flathub, saingy eo am-panatanterahana ny asa hamoronana fonosana Flatpak ofisialy ho an'ny Fedora miaraka amin'ireo rindranasa KDE.
Ny tetikasa dia mbola tsy nahazo ny satan'ny fanitsiana ofisialy an'i Fedora ary eo an-dàlam-pandrosoana.
Voatonona fa kasaina hatao izany ny kinova voalohany dia vonona amin'ny fotoana nananganana ny Fedora 35, fa ny kinova andrana dia efa azo zahana.
Tsy mbola misy sary vonona hampiasaina, ary hametrahana ny Fedora Kinoite dia asaina apetraka aloha ny Fedora Silverblue ary avy eo soloina ny birao amin'ny KDE amin'ny alàlan'ny fandefasana ireto baiko manaraka ireto:
Mba hanavaozana ny rafitra ifotony sy ny fonosana flatpak dia mila mihazakazaka ny baiko ianao (tsy mbola misy interface graphière tokony havaozina):
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba ny Fedora Kinoite azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Fedora 34 dia mikasa ny hifindra monina FreeType mankany HarfBuzz hanatsarana ny fambara
Ankoatr'izay, ny developer developera Fedora koa dia nilaza izany motera FreeType no hapetraka ho an'ny kinova Fedora 34 Ny endritsoratra famindrana fandaharana Fedora 34 hampiasana ny glyphs Engine Engine HarfBuzz.
Ny fonosana freetype-harfbuzz dia omena amin'ny fanandramana amin'ny Fedora Rawhide. Tsy mbola nodinihina ny fanovana avy amin'ny komity mpitantana injeniera Fedora (FESCo), izay tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana teknika ny fizarana Fedora.
Na dia ny fampiasana HarfBuzz amin'ny FreeType dia voalaza fa manatsara ny kalitaon'ny tolo-kevitra (manadio ny drafitry ny glyph rehefa rasterized mba hanatsarana ny famakiana amin'ny efijery ambany) rehefa mampiseho lahatsoratra amin'ny fiteny miaraka amina firaketana lahatsoratra sarotra, izay ahafahana mamorona glyphs avy amina litera maromaro.
Manokana, ny fampiasana HarfBuzz dia hanafoana ny olan'ny tsy firaharahiana rehefa manondro ligy izay tsy misy tarehintsoratra Unicode misaraka. Raha tsiahivina, ny fandikana ny tranomboky Pango tamin'ny taon-dasa hampiasa HarfBuzz dia niteraka olana tamin'ny fampisehoana endritsoratra taloha.
Ankoatra izany, Mariho ny fankatoavan'ny Komity FESCo ho an'ny fanontana Fedora rehetra hampiasa ny rafitra systemd-oomd ho valin-kafatra mialoha ny fahatsiarovana ao amin'ny rafitra fa tsy ny fizotran'ny earlyoom teo aloha.
Ny Systemd-oomd dia mifototra amin'ny subsistem-kernel PSI (Fampahalalana momba ny tsindry Pressure), izay mamela ny habakan'ny mpampiasa handinika ny mombamomba ny fotoana fiandrasana hahazoana loharano isan-karazany (CPU, fahatsiarovana, I / O) hanombatombanana tsara ny haavon'ny fampiasana ny rafitra sy ny toetran'ny fihemorana.
PSI dia ahafahana mamantatra ny fisian'ny fahatarana noho ny tsy fahampian'ny loharanom-pahalalana ary ny famaranana amin'ny fomba mifantina ny asan'ny fizotran'ny loharanom-pahalalana amin'ny dingana iray izay mbola tsy ao anatin'ny toe-javatra mitsikera ny rafitra ary tsy manomboka manapaka mafy ny cache na alefaso ny angona amin'ny fizarazarana swap.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fedora dia mampahafantatra an'i Kinoite mpiara-miasa Silverblue ary mikasa ihany koa ny hifindra monina FreeType mankany HarfBuzz
Elasticsearch nifindra tany amin'ny fahazoan-dàlana SSPL tsy maimaim-poana